'सरकार कामचलाउ के भन्या ? कसरी हुन्छ कामचलाउ ? अहिले गठन भएको जगभित्र के छ ?,'समर्थन आफू गर्ने फिर्ता लिन नसक्ने ! अर्को सरकार बनाउनका निम्ति एकदलीय दुई दलीय तीन दलीय बनाउने भन्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि कसरी काम चलाउ भयो ?.' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। आफै अड्काउने, आफै पड्काउने।
उनले विकास निर्माणका कामहरू देखेर कसैको प्रेसर बढेको भए त्यो थप बढ्ने बताए। उनले भने, ' विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलऔ,तथ्यांकमा खेलौं, आरोपमा मात्र समय खेर नफालौं।'
उनले माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान सुझाव दिए। उनले भने, 'समर्थन फिर्ता लिनुस् त्यसपछि अर्को विषयको सुरुवात हुन्छ । राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान सबै खुला छन् । '
उनले जनतामा जानु प्रतिगमन हुन्छ भने अग्रमगन के हुन्छ भन्दै प्रति प्रश्न गर्दै भने,' द्वन्दकालमा निरुंकुश राजासित मिलेर शाहीसाम्मेवाद लिएर उनीहरुका लागि गरेको वार्ता र छलफल अग्रमगन हो?'
चुनावदेखि डराउनेहरुले नै संसद विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ताजा जनादेशको विकल्प छैन। संसद विघटन बेठिक थिएन। बेलायत, भारतमा पनि चुनाव हुने गरेको छ। त्यो प्रतिगमन हुन्छ? चुनाव सुन्दै डराउने?’
देश अँध्यारो सुरुङमा फस्नबाट बचाउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको उनले दावी गरे।